Vankona : a.: Fiasan'ny mpandrafitra hanadiovany ny hazo ho tonga malamalama tsars: Ny vankona dia lehibe noho ny raboa. - t.i.f.: Vankonina, avankona, voavankona 1 mamankona, famankona, mpamankona / amankonana, famankonana / mahavankona. ~ F.-p,: Taim-bankona: potikazo mihoronkorona avy amin'n? hazo novankonina. jereo: ''vakona'' avy@ teniparitra betsileo. Mira amin'ny vankona Ahitsio